Barlamaanka oo ansixiyay xukuumadda cusub. - Wargeyska Faafiye
Home 2012 November 13 .Warka Barlamaanka oo ansixiyay xukuumadda cusub.
Barlamaanka oo ansixiyay xukuumadda cusub.
Barlamaanka Soomaaliya ayaa Talaadadii Maanta ansixiyay dhammaan tobankii wasiir ee uu magacaabay Ra’iisul-wasaare Cabdi Faarax Shirdoon.
”Barlamaanka ayaa cod buuxa ku ansixiyay xukuumadda cusub kadib markii la tixgaliyay duruufaha adag ee Soomaaliya horyaalla iyo marxaladda nugulka ah ee ay dhex jibaaxayso, iyo waliba markii aan dib u eegid ku sameeynay qorshaha uu soo gudbiyay ra’iisul-wasaaraha iyo xukuumaddiisa,” sida uu Sabahi u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar.
Cumar waxa uu sheegay in barlamaanku uu si degdeg ah u anxisiyay xukuumadda si “ay shaqadeeda u qabsato”. Waxa uu sheegay in ay codeeyeen 225 xildhibaan, iyada oo 219 ku codeeyeen ogolaasho, saddex ku codeeyeen diidmo saddex kalena ka aamuseen.
Xukuumadda waa mid ka mida xukuumadihii ugu tirada yaraa ee abid soo mara Soomaaliya waxana ku jira laba haween ah, gaar ahaan haweeneeydii ugu horreeysay ee abid dalka ka noqota wasiirka arrimaha dibadda.
Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga ayaa soo dhaweeyay ansixinta golaha xukuumadda.
“Tani waa dhacdo kale oo taariikhi ah oo ay Soomaaliya higsatay,” ayuu yiri Mahiga. “Magacaabidda liis nadiif ah oo ka kooban toban wasiir waxa ay guud ahaan calaamad u tahay rabitaanka hoggaanka Soomaaliya ee ku aaddan in uu ka gudbo caqliyaddii hore oo uu la yimaado isbaddal wanaagsan.”
Filed in: .Warka Tags: Barlamaanka oo ansixiyay xukuumadda cusub, Wasiirada
Egypt's new interim president: Judge Adly Mansour.
Wafdi ka socday IGAD oo tegay Kismaayo.
Nin xukun dil ah sugayay 30 Sano oo la sii daayay.
Nin Somaali ah oo Baasaboorkiisii Looga qaaday Markuu diiday in uu Noqdo Basaas Dalka U.K.